E-Journal: ဖိုးလှကြီး၊ သခင်၊ အာဠာဝက
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 9:48 PM
စာတွေအများကြီး ရိုက်တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Thank you for your post. There is Tha Khin Phoe Hla Gyi Road in my town too.
အခုလို.... သမိုင်းဝင်အာဇာနည် တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းလေး
မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို့.....။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရက သူ့ကို ဘယ်လိုပဲ
အရှုးလို့ စွပ်စွဲ စွပ်စွဲ.....သူ့လုပ်ရပ်တွေ က အခုတွေး အခု ကြက်သီးဖျန်းဖျန်းထရ တုံးပဲ ဗျ။
တကူးတက စုဆောင်းတင်ပြနေတာ ကျေးဇူးပါခမျာ။
ခုလိုလေး မျှဝေတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဗာဘိုရာ။ သခင်ဖိုးလှကြီးဆို ကျနော်တို့သိတာက ၄၅ ကျပ်တန်လောက်၊ ၁၃၀၀ပြည့် အရေးတော်ပုံတုံးက ရေနံမြေ အလုပ်သမား သပိတ်ခေါင်းဆောင် အဲလောက်သိတာဗျာ။ ခုလို စုံစုံစေ့စေ့လေး သိရမှတ်ရတော့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသဗျို့ ။
အခုမှပဲ.. သခင်ဖိုးလှကြီးအကြောင်းသေချာသိရတယ်.. အမျိုးများတော်နေလားဗျ.. ကောင်းတယ်ဗျာ.. သမိုင်းကိုပုံဖော်ရင် အဲလိုမှ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ...
ဟား ဟား။ ဆရာမျိုးကတော့ လုပ်ပြီ။ အမျိုးတော်ဘူးရယ်။